Bachelor of Tourism and Hospitality Management (BTHM)မိတ်ဆက် – NMDC
Bachelor of Tourism and Hospitality Management (BTHM)မိတ်ဆက်
By NMDC Uncategorized Comments Off on Bachelor of Tourism and Hospitality Management (BTHM)မိတ်ဆက်
Tourism Management နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ Introduction to Tourism, Tourism Planning and Product Development, Destination Management and Marketing ဘာသာရပ်တွေ၊
Hospitality Management နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Resort and Spa Hotel Management, Facilities Management, Room Division Management အစရှိတဲ့ဘာသာတွေအပြင်
Management နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေ၊
English for Tourism, English for Hospitality စသည်ဖြင့် လိုအပ်တဲ့ဘာသာရပ်တွေအကုန်လုံးကို သက်ဆိုင်ရာစာသင်နှစ်အလိုက် သင်ယူခွင့်ရမှာပါ
(စာသင်နှစ်တွေအလိုက် လေ့လာရမယ့်ဘာသာရပ်တွေအကြောင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ အောက်မှာဓာတ်ပုံအနေနဲ့ ထည့်ပေးထားပါတယ်)
၂ ။ ဘယ်လိုသင်ယူရမှာလဲ ?
The Bachelor of Tourism and Hospitality Management ဘာသာရပ်ကို လေးနှစ်တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး စာသင်နှစ်တစ်နှစ်ကို semester နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ semester တစ်ခုမှာတော့ ဘာသာရပ်ခြောက်ခုပါဝင်ပါတယ်။
တတိယစာသင်နှစ်ရဲ့ ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာတော့ ခြောက်လ Internship Program မှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာသင်ကြားရေးတွင် ဆရာ၊ဆရာမများမှ ပို့ချခြင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ပြသခြင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့ဆောင်ရွက်မှုများ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ E-Learning စနစ်ကိုလည်း တည်ထောင်ထားပါတယ်။
သင်ကြားတတ်မြောက်မှုကို စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းသာမက စာတမ်းများရေးသားခြင်း၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းစသောနည်းလမ်းများဖြင့်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးနှစ်တွင် Dissertation Project နှစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃ ။ လူငယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
NMDC မှာ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးမှအစ ဆရာ၊ဆရာမများကပါ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝရှိပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပေးထားပါတယ်။
ကျောင်းမှာနှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ၊ ဆရာကန်တော့ပွဲ၊ Art Show, Job Fair, Open Campus ပွဲတွေကိုလည်း ဆရာ၊ ဆရာမတွေက လမ်းညွှန်ပေးမှုသာရှိပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများက ပဲ အစမှအဆုံး ဦးစီးပြီးလုပ်ကိုင်ကြတာပါ။
အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ကျောင်းသားများဟာ ကျောင်းစာမှာထူးချွန်ရုံတင်မကဘဲ internship အတွေ့အကြုံတွေ၊ ဒီပွဲတွေကရတဲ့ သင်ခန်းစာတွေနဲ့ စာသင်နှစ်လေးနှစ်ပြည့်တဲ့အခါ အလုပ်ခွင်ထဲတန်းဝင်ဖို့ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဒီ page admin တွေ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်)
၄။ ကျောင်းဝင်ခွင့်ဘယ်လိုလျောက်ရမလဲ ?
Bachelor of Tourism and Hospitality Management ကို တက်ချင်တယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်းရမှတ် (၄၀၀) အထက်ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာရမှတ် (၆၀) ရရှိသူများဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်မြန်မာပြည်စာစစ်ဌာနများမှ အောင်မြင်သူများသာ လျှောက်ထားနိုင်မှာပါ။
လျှောက်လွှာပေးမည့်ရက်နှင့် လျှောက်လွှာလက်ခံမည့်ရက်များကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများနှင့် ဤ facebook page မှ ကြေငြာပေးသွားပါမယ်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်အတွက် Bachelor of Tourism and Hospitality Management ဘာသာရပ်ဝင်ခွင့်နောက်ဆုံးရမှတ်မှာ (၄၅၉) ဖြစ်ပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ ။ ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ဦးရေအရ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရမှတ်များဖြစ်ပါတယ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကြိုတင်မသတ်မှတ်ထားပါ)
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက comment၊ message box ကနေလည်း မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဗျ။
လူကိုယ်တိုင်လာရောက်စုံစမ်းချင်ရင်လည်းNational Management Degree College – အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၊ ကျောင်းသားရေးရာဌာန (ဖုန်း ၀၁ ၂၉၂၅၆၆) သို့ လာရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
တခြားဘာသာရပ်မိတ်ဆက်တွေ၊ ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာပေးမည့်ရက်တွေကိုလည်း ဒီ page ကနေပဲ တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and share လေးလုပ်ထားပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေဗျ။
Welcome to Bachelor of Tourism and Hospitality Management, Juniors!
Photo – Nandar Myint Htin